निकै चलाख र बुद्धिमानी हुन्छन् यी ५ राशिका महिलाहरु - दैनिकी मिडिया
६ मंसिर २०७७, शनिबार ०८:१३
हरेक मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको गुण वा क्षमता हुन्छ। त्यस्तै, मानिसको राशि अनुसार पनि उनीहरुको गुण र क्षमता फरक हुन्छ। कुनै राशिका मानिस निकै चतुर, चलाख हुन्छन् र कुनै राशिका मानिस सोजा र इमान्दार स्वभावका हुन्छन्। यो राशि अनुसार फरक पर्छ।
महिलाको सन्दर्भमा कुन-कुन राशि भएका महिला अधिक चलाक र बुद्धिमान हुन्छन् त ? चलाखीपूर्वक आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्न सक्नु पनि एक कला हो। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यी राशिक महिलाहरु बुद्धिमान महिलाको श्रेणीमा पर्छन्।
राजाको समान जीवन बिताउन रुचाउने यस राशिक महिलाहरु सधै आफ्नो मिहेनत र बुद्धि विवेकमा विश्वास गर्छन्। यस राशिका महिलाहरुले थोरै ढिलो समझदारी देखाउँछन् तर यसको अर्थ यो होइन कि यी महिलाहरु बुद्धिमान हैनन्। सिंह राशिका महलाहरुले कुनै कार्य गर्ने सोच राखे पनि कुनै पनि स्थितिमा गरेरै छाड्छन्।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कन्या राशिका महिलाहरुको निकै बुद्धिमानी हुन्छन्। उचित परिस्थितिमा मात्र प्रतिक्रिया जनाउने यिनीहरूमा कुनै पनि स्थितिको समान गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। आफ्नो विवेक र बुद्धिको उचित प्रयोग गर्न सक्षम यी महिलाहरु स्वभावले निकै असम पनि हुन्छन्।
हरेक समस्याको सहजै समाधान निकाल्न सक्षम तुला राशिका महिलाहरु आफ्नो बुद्धिमानीको कारण नै चिनिन्छन्। यस राशि भएका महिलाहरु कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्छन्। कुनै पनि समस्या उत्पन्न भएमा यस राशिका महिलाले हरेक किसिमले समाधान निकालेर नै चैनको सास फेर्छन्। यस राशिका महिलाहरु एकदमै मिलनसार मित्र मानिन्छन् ।
यस राशिका महिलाहरु सबैभन्दा बढी समझदार हुन्छन्। तुला राशि भएका महिलाले सधैं स्थिति अनुकूल नै निर्णय लिन्छन्। यस राशिका महिलाहरु सबैभन्दा अलग सोचका हुन्छन्। रचनात्मक गुणले सम्पन्न यिनीहरू ज्ञानको धनि हुन्छन्। आफ्नो गहन ज्ञान तथा कुशल सोचको कारण यी महिला हरेक समस्याको कुनै न कुनै हल निकाल्न सफल हुन्छन्।
मीन राशिलाई भावुक राशि भनिन्छ। यस राशिका महिलाहरु सधैं दिमागले काम लिने गर्छन्। यदि यिनीहरूमा कुनै एकदमै महान विचार छ भने त्यसमा हृदय देखि नै काम गर्छन् र त्यसलाई सबैको सामु ल्याउन अधिक मिहेनत गर्छन्। जस्तो सुकै अप्ठेरो परिस्थितिको पनि सामना गर्न सक्ने गुण हुन्छ यस राशिका महिलाहरुमा।
नेकपा फुट्दैन, फुटाउन दिइँदैन: भीम रावल
सुत्ने कोठामा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी चीज, मानिन्छ अशुभ
सेती लोकमार्गको काम सुचारू हुने, रुख काट्नका लागि सरकारले दियो अनुमति
देशभर २४ घण्टामा थपिए यति संक्रमित, कतिले जिते कोरोना ?
व्यवस्थापक : अम्बिका भण्डारी